ỊHAZI FIREWALL NA ROUTER MIKROTIK - NGWA - 2020
Ịchọ Intanet, na-ege egwu, na-ekiri vidio - ihe a nile na-eduga n'inweta ọtụtụ ihe mkpofu. N'ihi ya, ọsọ nke ihe nchọgharị ahụ ga-ata ahụhụ, a gaghị enwekwa vidiyo vidiyo. Iji dozie nsogbu a, ịkwesịrị ihichapụ ahịhịa ahụ na ihe nchọgharị ahụ. Ka anyị chọtakwuo otu esi eme nke a.
Otu esi ehichaa ihe nchọgharị weebụ
N'ezie, ịnwere ike iji ngwaọrụ ndị a wuru ewu iji kpochapụ faịlụ na ekwesighi na ihe nchọgharị. Otú ọ dị, mmemme na ntanetị ndị ọzọ ga - enyere aka mee ka ọ dị mfe karị. Ị nwere ike ịgụ isiokwu banyere otu esi ehichasị ahịhịa na Yandex Browser.
Gụkwuo: Nhichacha zuru ezu nke Yandex. Nchọpụta site na mkpofu
Mgbe ahụ, anyị ga-ahụ otu esi ehichapụ na ihe nchọgharị weebụ ndị ọzọ (Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome).
Usoro 1: Wepụ Extensions
Nchọgharị nwere ohere ịchọ ma jiri ụdị tinye-ons dị iche iche. Ma, ka ha na-etinyekwu ya, otú ahụ ka a ga-eburu kọmputa ahụ. Dị ka oghe taabụ, ọrụ ntinye ugbu a dịka usoro dị iche. Ọ bụrụ na ọtụtụ usoro na-agba ọsọ, mgbe ahụ, ya mere, ọtụtụ RAM ga-ekpochapụ. N'ihi nke a, ọ dị mkpa ka ị gbanyụọ ma ọ bụ wepụ kpamkpam nkwụsị ndị na-adịghị mkpa. Ka anyị lee otú a ga-esi mee nke a na ihe nchọgharị weebụ ndị a.
1. Na nchịkọta nhọrọ, ị ga - pịa "Ọpụpụ".
2. Ndepụta niile tinye-ons ga-apụta na ibe. Enwere ike iwepu ma ọ bụ nwee nkwarụ na-enweghị mkpa.
1. Na "NchNhr" meghee "Add-ons".
2. Ngwa ndị ahụ onye ọrụ na-adịghị mkpa ga-ehichapụ ma ọ bụ gbanyụọ.
1. Dị ka nsụgharị mbụ, ọ dị gị mkpa "NchNhr" imeghe "Ntọala".
2. Ọzọ ị ga-aga tab "Ọpụpụ". Enwere ike wepu ma ọ bụ nwee nkwarụ nhọrọ ahụ.
Usoro 2: Wepu ibe edokwubara
Ihe nchọgharị ahụ nwere ọrụ wuru maka nhichapụ ngwa ngwa nke edokọbara echekwara. Nke a na-enye gị ohere iwepụ ndị na-adịghịzi mkpa.
1. Na ihe nchọgharị mbụ, chọọ bọtịnụ "Akwụkwọ edokwubara" ma pịa ya.
2. Na etiti nke ihuenyo niile ibe edokọbara echekwara ya site n'aka onye ọrụ. Ịga na otu n'ime ha ị nwere ike ịhụ bọtịnụ ahụ "Wepu".
1. Na n'elu panel nke nchọgharị, pịa bọtịnụ "Akwụkwọ edokwubara"na n'ihu "Gosi ihe edokọbara niile".
2. Mgbe windo ahụ ga-emeghe. "Ọbá akwụkwọ". N'ime etiti i nwere ike ịhụ akwukwo onye ozo a zoputara. Site na ntinye aka na otu taabụ, ị nwere ike ịhọrọ "Hichapụ".
1. Họrọ na ihe nchọgharị "NchNhr"na n'ihu "Akwụkwọ edokwubara" - "Bookmark Manager".
2. N'etiti etiti windo na-egosi, enwere ndepụta nke ibe niile echekwara. Iji wepu ibe edokọbara, pịa nri na ya wee họrọ "Hichapụ".
Usoro 3: Nhichapu ntanetị
Ọtụtụ ihe nchọgharị weebụ na-enye atụmatụ bara uru - ichekwa okwuntughe. Ugbu a, anyị ga-atụle otú ị ga-esi wepụ okwu mkpịsị ndị dị otú ahụ.
1. Na mwube ihe nchọgharị, gaa na taabụ "Nchebe" ma pịa "Gosi ikikere niile".
2. windo ọhụrụ ga-egosipụta ndepụta nke saịtị na okwuntughe echekwara. Dịrị otu n'ime ihe ndepụta - akara ngosi ga-apụta "Hichapụ".
1. Iji hichapụ okwuntughe echekwara na ihe nchọgharị ahụ, ịkwesịrị imeghe "NchNhr" ma gaa "Ntọala".
2. Ugbu a, ị ga-aga tab "Nchebe" ma pịa "Zọpụtara Okwuntughe".
3. Na etiti e gosipụtara, pịa "Hichapụ niile".
4. Na windo na-esote, kwenye na nhichapụ.
1. Mepee "NchNhr"na mgbe ahụ "Ntọala".
2. Na ngalaba "Okwuntughe na ụdị" pịa njikọ ahụ "Hazie".
3. Etiti na saịtị na okwuntughe ha ga-amalite. Ị na-atụgharị òké n'ihe ụfọdụ, ị ga-ahụ akara ngosi ahụ "Hichapụ".
Nzọụkwụ 4: Hichapụ Ozi Ederede
Ọtụtụ ihe nchọgharị na-ejikọta ozi n'ofe oge - nke a bụ cache, kuki, akụkọ ihe mere eme.
Kọwaa akụkọ ihe mere eme na ihe nchọgharị
Ichecha oghere dị na Opera nchọgharị
1. Na ibe, pịa bọtịnụ. "Akụkọ ihe mere eme".
2. Ugbu a chọta bọtịnụ ahụ "Kọwaa".
3. Kọwaa oge maka ihichapụ ozi - "Site na mmalite". Ọzọ, tinye akọrọ n'akụkụ ihe niile dị n'elu.
Na pịa "Kọwaa".
1. Mepee "NchNhr"na n'ihu "Akwụkwọ".
2. N'elu nke etiti bụ bọtịnụ. "Hichapụ log". Pịa ya - a ga-enye ndokwa pụrụ iche.
Ị ghaghị ezipụta oge iwepụ - "Mgbe niile", yana akọrọ na nso ihe niile.
Ugbu a anyị na-agbanye "Hichapụ".
1. Iji kpochapụ ihe nchọgharị, ị ghaghị ịgba ọsọ "NchNhr" - "Akụkọ ihe mere eme".
2. Pịa "Kọwaa ihe mere eme".
3. Mgbe ihichapụ ihe, ọ dị mkpa ịkọwa oge - "Maka oge niile", ma debe nyochaa na ihe niile.
Na njedebe i kwesịrị ikwenye nhichapụ site na ịpị "Kọwaa".
Usoro 5: ihichapụ site na mgbasa ozi na nje
Ọ na-eme na ngwa ngwa ma ọ bụ mgbasa ozi na-etinye na ihe nchọgharị nke na-emetụta ọrụ ya.
Iji kpochapụ ụdị ngwa ahụ, ọ dị mkpa iji antivirus ma ọ bụ nyocha nyocha. Ndị a bụ ụzọ dị mma iji kpochapụ ihe nchọgharị gị site na nje na mgbasa ozi.
Gụkwuo: Mmemme maka iwepụ mgbasa ozi sitere na ihe nchọgharị na site na PC
Omume ndị a n'elu ga-enye gị ohere ihichapụ ihe nchọgharị ahụ ma si otú ahụ laghachi nkwụsi ike na arụmọrụ ya.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ngwa 2020